Ny tontolo iainana sy ny Fiara
Par: Mandrora mitsilany ny mampiasa gasoil
Date: 22 janvier 2018 - 14:46
Manahoana daholo isika ato.
Iza ianareo no mahatsapa fa tena maloto ny rivotra iainana eto antananarivo?
Mety azo heritreretina ve ny hanafoanana ny fiara rehetra mandoto be tsy handeha eto amintsika? Toy ny Camion be ilay karazanle mpitatitra briky ohatra, na irony fiara kely manetroka be irony. Ao koa ireo scooter kely be dia be manentroka be ireny?
Sa mbola hoe tany mahantra dia aleo manome aretina ny zanak'tsika toy izay hiezaka ny tsy handoto?
PS: tena leo ny loto iainana eto aho satria hatramin'ny zanako marary lava noho io. Ka raha diniho aloha vao hamaly ahy hoe ndana mifindra monina.
Re: Ny tontolo iainana sy ny Fiara
Date: 23 janvier 2018 - 12:00
Tsy dia resaka fiara mandoto rivotra loatra ny tena fototry ny olana eto Antananarivo fa ny tsy fisian'ny hazo ...
Raha ny tokony ho izy dia HAZO BE iray = mponina 4.
Tsy ho ampahatsiahivina intsony ny asan'ny HAZO @ fanadiovana ny rivotra fa dia raha mandeha 67Ha iny isika dia tsa misy hazo maniry na 1 aza fa dia izay eo dia tapahina fa sao hono mianjera amin'ny mpivarotra amoron-dalana.
Vokany dia tsy misy mpanadio ny rivotra
Efa nanao fanairana teto ny manampahaizana vahiny saingy tsy nohenoina izany ... raha ny filazany dia tsy ampy efa ho 38% n'ny filana Oxygène iliain'ny olona ny rivotra misy eto ... marina fa anisan'ny mahatonga izany ny altitude misy an'i TANA fa indrindra indrindra hoy izy ny tsy fisian'ny hazo maniry.
Ary raha ny voalazan'ny fanadiadiana dia anisan'ny causes mahatonga ny fahafatesana ny loton'io rivotra io (miteraka AVC sy Cancer an'ny Tanora maro eto Antananarivo)